किन म अध्यारोमा डराउँछु ?
२०७६ आश्विन ८ बुधबार
सामान्यतया अध्यारोमा डर लाग्नुलाई सामान्य मानिन्छ । तर कोहि मानिसहरु यस्तापनि हुन्छन् जो अध्यारोमा एक मिनेटपनि बस्न सक्दैनन् । यदि त्यस्तो समस्या छ भने ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ कतै मानसिक रोगले सताएको त छैन ?
यो जानेर तपाईलाई मजा आउँछ किनकी तपाईलाई पनि काँही न काँही डर त लागेको होला रु बास्तवमा जब हामीलाई आफ्नो आसपास केही चिज वा कोई भएको आभाष हुन्छ ।
जब उक्त संकेत अर्को हिस्सामा जान्छ र एड्रेनलाइन अथवा स्ट्रेस हर्मोन उत्पादन हुन्छ । तब हामीमा डर वा चिन्ताको भावना आउँन लाग्छ । यो संकेत न्यूरोनको साहारामा ग्लुटामेट नामको भागमा पुगेपछि हामी भागन, चिच्याउन वा त्यसको सामना गर्ने सोच आउँछ ।
भागने वा त्योसँग लड्ने भन्ने रिएक्शनबाट शरीरमा एक प्रकारको जोस आउँछ र मुटुको धड्कन छिटो छिटो चल्न लाग्छ ।